ကင်ဆာ: စိတ်ကျန်းမာရေးသြဇာလွှမ်းမိုးမှုသေမင်း၏အန္တရာယ် - Tele RELAY တစ်ခု
မူလစာမျက်နှာ » ကနျြးမာရေးသတင်းများ "ကင်ဆာ: စိတ်ကျန်းမာရေးသြဇာလွှမ်းမိုးမှုသေမင်း၏အန္တရာယ်
Tele RELAY တစ်ခု9မတ်လ 2019
ကမ္ဘာတစ်ဝန်းအကြောင်းကိုတဦးတည်းကင်ဆာကြောင့်ခြောက်လသေဆုံးမှုအတွက်။ အတိုင်းကမ္ဘာ့ကျန်းမာရေးအဖွဲ့ (WHO) ကဤကင်ဆာကြောင့်သေဆုံးမှု၏သုံးပုံတစ်ပုံအန္တရာယ်အချက်များဖြင့်သို့မဟုတ်ပြောင်းလဲအပြုအမူတွေကြောင့်ဖြစ်ရတဲ့နေကြသည်။ ဤအအပြုအမူတွေများထဲတွင်အလုံအလောက်အားကစားလုပ်နေတာမဟုတ်ဘူး၏တကယ်တော့ဆေးလိပ်သောက်အရက်သောက်သို့မဟုတ်အလုံအလောက်မျှတတဲ့အစာစားခြင်းမဟုတ်, ရှိပါတယ်။
အမေရိကန်မှာတော့သုတေသီအဖွဲ့တစ်ဖွဲ့, ကို Zachary Klaassen, သြဂတ်အတွက်ဂျော်ဂျီယာကင်ဆာစင်တာ (ဂျော်ဂျီယာ) မှာကင်ဆာရောဂါရှာဖွေကုသရေးပါရဂူများကဦးဆောင်အသေခံဘို့အခြားအန္တရာယ်အချက်တွေ့ရှိခဲ့ပါတယ်။ ထို့ကြောင့်စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာပြဿနာများ၏သမိုင်းနှင့်အတူကင်ဆာနဲ့လူနာရောဂါဆက်လက်ရှင်သန်နိုင်ဖို့လျော့နည်းဖွယ်ရှိပါလိမ့်မည်။ လေ့လာမှု၏ရလဒ်များဂျာနယ်ထဲမှာပုံနှိပ်ထုတ်ဝေထားပါသည် ကင်ဆာ၏ဗြိတိန်ဂျာနယ်.
အဆိုပါသုတေသီများ 675 နှင့် 000 အကြားကင်ဆာရောဂါရှိတယ်လို့တွေ့ရှိခဲ့ 1997 2014 ထက်ပိုလူမျိုး၏ဆေးဘက်ဆိုင်ရာမှတ်တမ်းများခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာ။ ကင်ဆာ: ဆယ်အသုံးအများဆုံးကင်ဆာတွေထဲကတစ်ခုချင်းစီမှလူနာဆငျးရဲဒုက်ခ ဆီးကျိတ်, du သူ၏, du အဆုတ်, du ပြန်လည်က The စည်ပေါင်းကင်ဆာ အူမ, melanoma လည်း၏, ကင်ဆာendometrial (သားအိမ်၏ခန္ဓာကိုယ်) ၏ သိုင်းရွိုက် et de la ပါးစပ်။ သင်တန်းသားများကိုနီးပါးတစ်ဝက်တစ်စိတ်ရောဂါအကဲဖြတ်ခံယူ။ ကင်ဆာ၏ရောဂါမှမတိုင်မီငါးနှစ်ကာလအတွင်း7900 လူတွေ4000 ထက်ပိုမိုကြောင့်စိတ်ကျန်းမာရေးပြဿနာဆေးရုံခဲ့အရေးပေါ်စိတ်ရောဂါအကူအညီနဲ့လက်ခံရရှိခဲ့သည်။
လေ့လာမှု၏ရလဒ်များကိုရှင်းလင်းပြတ်သားနေသောခေါင်းစဉ်: စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာပြဿနာများအတွက်ဆေးရုံတင်လူနာ 73% ကနေသေမင်း၏အဖြစ်တိုးမြှင့်စွန့်စားမှုရှိခဲ့ပါတယ်။ ဆရာဝန်တစ်ဦးအနေဖြင့်အရေးပေါ်စိတ်ရောဂါအကူအညီနဲ့ရရှိထားသူများသည် 36% ထက်သူတို့ရဲ့ကင်ဆာသေဖို့ပိုများပါတယ်ခဲ့ကြသည်။ နောက်ဆုံးအနေနဲ့တစ်စိတ်ကျန်းမာရေးပြဿနာနှင့် ပတ်သက်. အထွေထွေ Practitioner တိုင်ပင်သောသူတို့အားသေဖို့အပြင်အန္တရာယ်များ၏ 5% ရှိခဲ့ပါတယ်။
"လတ်တလောစိတ်ရောဂါသမိုင်းကင်ဆာနှင့်အတူလူနာကုသအားလုံးဆရာဝန်များနှင့်သူနာပြုများမှသတိပေးဖြစ်သင့်ပါတယ်" ဟုကို Zachary Klaassen ကဆိုသည်။ သူကဆက်ပြောသည်: "ဒါဟာကျနော်တို့ကိုသူတို့ကအကောင်းဆုံးဖြစ်နိုင်သမျှစောင့်ရှောက်မှုခံယူခြင်းနှင့်သူတို့ချိန်းလက်လွတ်တဲ့အခါမှာသူတို့ကအထူးသဖြင့်, စောင့်ကြည့်လျက်ရှိသည်ကြောင်းသေချာစေရန်အနီးကပ်ဒီလိုလူနာစောင့်ကြည့်ကြောင်းမရှိမဖြစ်ပါပဲ။ " Klaassen များအတွက်မကြာခဏစိတ်ကျန်းမာရေးပြဿနာများနှင့်အတူစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာစိတ်ဖိစီးမှုဟာခန္ဓာကိုယ်ရဲ့သဘာဝအကာကွယ်ရေးယန္တရားကိုထိခိုက်နိုင်ပါတယ်။ ဥပမာအားများအတွက် စိတ်ကျရောဂါ စိတ်ဖိစီးမှုဆက်စပ်ကင်ဆာ detect ဖို့နဲ့သူ့ကိုဆန့်ကျင်တိုက်ထုတ်နိုင်ဖို့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ရဲ့စွမ်းရည်ကိုထိခိုက်စေနိုင်ပါတယ်။
ပြန်ကြားရေးကင်ဆာနှင့် Lyme ရောဂါအတွက်အသုံးဝင်